सही कुराको पक्षमा संघर्ष गर्नु मेरो दायित्व हो-नारायणकाजी - मूल्याङ्कन अनलाइन
सही कुराको पक्षमा संघर्ष गर्नु मेरो दायित्व हो-नारायणकाजी
मूल्याङ्कन अनलाइन | June 12, 2017
(नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश पार्टीभित्रका विसंगति र गलत प्रवृत्तिलाई लिई आवाज उठाउनेको रुपमा चर्चित नेता हुन् । त्यस्तै एक सन्दर्भलाई लिई हालै मात्र उनले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा ‘राजनीतिलाई सत्ताको फोहोरी खेल नै बनाइरहने हो भने यत्रो बलिदान र परिवर्तनको के अर्थ ?’ लेखेर पार्टीभित्र मौलाउँदै गएको सत्तामुखी संस्कृतिमाथि औंला ठड्याएका छन् । यसै सन्दर्भका साथ समसामयिक राजनीतिलाई समेत जोडेर मूल्याङ्कन अनलाइनका लागि नेता प्रकाशसँग कमल गिरीले लिएको कुराकानीको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ । – सम्पादक)
सरकारले पूर्णता कहिले पाउँछ ?
अहिलेसम्म निश्चय भइसकेको छैन । नेपाली कांग्रेसले दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि बिस्तार गरौँ कि भन्ने धारणा राखेको छ । त्यसलाई हामीले सहमति जनाइसकेका छैनौं । छिटोभन्दा छिटो पूर्णता दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । हाम्रो तर्फबाट जानेहरुको चाहिँ छिट्टै टुङ्याउनुपर्छ भन्नेमा म छु । । हामीले पाउने मन्त्रालयको संख्या र कुनकुन मन्त्रालय भन्ने कुराको टुंगो अझै लागिसकेको छैन । सायद एक/दुई दिनमा टुंगो लाग्नेछ र हामीले हाम्रो तर्फबाट जाने मन्त्रीहरुलाई छिट्टै टुंग्याउनेछौँ ।
माओवादीभित्र मन्त्री बन्नेहरुको प्रतिस्पर्धा धेरै भएर टुंग्याउन गाह्रो भएको त होइन ?
पार्टीभित्र छलफल हुने कुरा सामान्य हो । अहिलेको बैठकमा अध्यक्षको प्रस्तावमै निर्णय भएको हो । को बन्ने/नबन्ने बारे त्यस्तो पक्ष/विपक्ष भोटिङ आदि केही भएको छैन । कसैले पनि कुनै लिखित असहमति राखी नोट अफ डिसेन्ट लेखेको छैन ।
अब बाँकी मन्त्रालय बाँडफाँड भइसकेको छ कि छैन ?
– टुंगिसकेको छैन । त्यो छिट्टै टुंगिन्छ ।
नेपालको अहिलेको राजनीतिको मूल प्रवृत्ति गलत दिशातर्फ गइराखेको छ । सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य र मान्यताको पूरै स्खलन भएर गइराखेको छ । त्यसलाई सच्याउनु पर्दछ ।
यो सरकारमा कुनकुन दलको सहभागिता हुनेछ ?
– राप्रपा सरकारमा जाने निश्चित छ । अन्य साना पार्टी पनि सरकारमा जाने तयारीमा छन् । कतिपय मधेसवादी दलहरु निर्वाचनमा जाने कुरा पनि निश्चय हुन बाँकी रहेकाले उहाँहरु सरकारमा जानेबारे अझै टुंगो लागिसकेको छैन ।
वर्तमान सरकारका प्राथमिकताहरु के–के हुन् ?
– तीनवटा निर्वाचन समयमा नै गर्ने यो सरकारको पहिलो कार्य हुनेछ । त्यस अन्तर्गत मिति तोकिएको दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्ने र प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन निर्धारित समयसीमा भित्रै सम्पन्न गर्ने पहिलो कार्यभार रहेको छ ।
दोस्रो कार्य, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने र तेस्रो, भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निमाणलाई प्राथमिकता दिने र चौथो, जनताका आकांक्षालाई ध्यान दिनुपर्नेछ । तर, यी सबै गर्नलाई हाम्रो राष्ट्रियता, सार्वभौमता र स्वाधीनतको रक्षा गर्दै नेपालले आफैले आफ्नो बारेमा निर्णय गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत गयो भने मात्रै हामी सफल हुनेछौँ ।
नेपाली राजनीतिक वातावरण जसरी हुन्छ, चुनाव जित्ने, जसरी सरकारमा जाने र जसरी हुन्छ पैसा कमाउने प्रवृत्ति नै नेपालको राजनीतिको र त्यस्तै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल प्रवृत्ति बन्ने खतरा देखिँदैछ । यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउला ? यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनमा थप जटिलता देखिँदैछ । राजपा निर्वाचनमा भाग नलिने गरी आन्दोलनको घोषणा गर्दैछ । कसरी हुनसक्छ तपाईंले भनेजस्तो तोकिएकै मितिमा निर्वाचन ?
– मधेसी मोर्चा भित्रको मुख्य घटक संघीय समाजवादी फोरमले निर्वाचनमा भाग लिने घोषणा गरिसकेको छ । र, उहाँहरु निर्वाचनको तयारीमा हुनुहुन्छ । त्यस्तै राजपालाई निर्वाचनमा ल्याउनको निम्ति र अनुकूल वातावरण बनाउन हामीले स्थानीय निर्वाचन ऐनमा पनि संशोधन गरिसकेका छौँ । यसरी वातावरण बनाइँदैछ । आशा छ, उहाँहरु पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुनेछ । तर, उहाँहरुले संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या पनि बृद्धि हुनै पर्ने भन्नुभएको छ । त्यो अहिले सम्भव देखिँदैन । त्यसरी उहाँहरु आउनुभएन भने पनि आम रुपमा मधेसी जनता निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन् । मधेसी पार्टीहरुमध्ये पनि धेरै पार्टी सहभागी हुनेछन् ।
केही दिनअघि तपाईंको फेसबुक स्टाटसमा ‘राजनीतिलाई सत्ताको फोहोरी खेल नै बनाइरहने हो भने यत्रो बलिदान र परिवर्तनको के अर्थ ?’ भन्ने विषयवस्तु आयो । यसको अर्थ माओवादीभित्र मन्त्रीको लागि व्यापक विवाद भएको भन्ने अर्थ लगाइयो नि । के हो ?
– नेपाली राजनीतिक वातावरण जसरी हुन्छ, त्यसरी चुनाव जित्ने, जसरी पनि सरकारमा जाने र जसरी हुन्छ त्यसरी पैसा कमाउने प्रवृत्ति नै नेपालको राजनीतिको र त्यस्तै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल प्रवृत्ति बन्ने खतरा देखिँदैछ । यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउला ? यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो भनेर मैले समस्त नेपालका राजनीतिकर्मी र हाम्रो पार्टीका कमरेड र जनतालाई ध्यान आकर्षण गर्न खोजेकै हुँ । मेरो स्टाटसको सन्दर्भ पनि त्यही थियो । त्यसमा मैले अहिलेको सरकार गठन प्रक्रिया र हाम्रो पार्टीको बारेमा प्रत्यक्ष केही उल्लेख गरेको छैन ।
तपाईंलाई कतिपय मान्छेले अलि बढी आदर्शवादी हुनुभयो, राजनीतिमा त्यस्तो आदर्शले काम गर्दैन भन्ने गर्छन् नि ?
– पार्टीमा लगातार आफूले देखेको सही कुराको पक्षमा संघर्ष गर्नु मेरो दायित्व हो । हाम्रो संघर्षले त्यो रिजल्ट आइनसकेको अवस्था हुनसक्छ । तर, पनि हामीले पार्टीलाई सही दिशातर्फ लग्न लगातार प्रयत्न गरिरहनु पर्दछ । यद्यपि यथास्थितिमा गुणात्मक परिवर्तन आएको छैन । हामी निराश भएर पार्टी, समाज अगाडि बढ्दैन । सही कुराको पक्षमा लगातार लड्नु जरुरी छ । त्यसको उद्देश्य पार्टी बनाउने नै हो ।
मूल्यांकन खबर / विश्लेषण, अन्तर्वार्ता No Comments » Print this News
« २ सय ३ म्यादीले दिए राजीनामा (Previous News)
(Next News) मतदान गर्न ५ घण्टा हिँडेर जानुपर्छ, के गर्ने ? »
माओवादी आन्दोलन फेरि गोलबन्द हुन्छ : किरण